10th Gen နဲ့ ပွဲထုတ်ထားတဲ့ MSI GF63 က အခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲ - PX
MSI ရဲ့ GF စီးရီးတွေဟာ တန်ဖိုးသင့် Gaming Laptop အနွယ် ဖြစ်သလို ပါဝင်လာတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ Build Quality ကြောင့် စိတ်ဝင်တစား ဖြစ်နေတဲ့ ထုတ်ကုန်ဆိုရင် မမှားပေဘူး။
GF စီးရီးရဲ့ Signature လို့ ပြောနိုင်တာ ပြိုက်ဘက် Laptop တွေနဲ့ယှဥ်လို့ စျေးခြင်းတူနေရင် ပိုသာတဲ့ Hardware မျိုးတွေ ပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း ဘောင်ပါးပါးလေးတွေကို သဘောတွေ့လာတဲ့အခါ ဘောင်ပါးပါးနဲ့ Laptop တွေကို Mid Performance နဲ့ High End တွေမှာသာ မက Entry Level ဖြစ်တဲ့ GF နဲ့ GL တို့မှာပါတွေ့လာရပါပြီ။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ် Model တော့ကွာတာပေါ့။
အခုဆိုရင်လည်း ကျွန်တော်လက်ထဲမှာ ရောက်နေတာလည်း နည်းနည်းလေး ကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့ MSI GF63 Thin 10SCXR လေးက နောက်ဆုံးပေါ် 10th CPU နဲ့ GTX-16 Series တွဲဖက်ထားတဲ့ Entry Level Gaming Laptop ပါ။
GF63 10SCXR အကြောင်းကို CPU ကနေ စလိုက်ကြတာပေါ့
GF63 အကြောင်းပြောရင်း 6-cores/ 12-threads ပါဝင်တဲ့ i7-10750H ပရိုဆက်ဆာ သုံးထားတာပါ။ Base Clock အနေနဲ့ 2.6GHz ရှိမှာဖြစ်ပြီး Thermal Velocity Boost ဆိုရင် 5.00 GHz Frequency အထိ တင်ပေးနိုင်မှာပါ။ ဒါမယ့် သတိချပ်စရာ 5,000 MHz Speed နဲ့ Run ဖို့ ခွင့်ပြုထားတဲ့ Temperature (အပူချိန်) က 70°C ပါ။
ဒါကြောင့် အသစ်စက်စက် i7 ပရိုဆက်ဆာဟာ 9th Gen i7-9750H ထက် သီအိုရီအရ မြန်ဆန်မယ်လို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် တကယ်တမ်း Long Term သုံးတဲ့အခါ Laptop တစ်လုံးရဲ့ Cooling Solution (သို့) အေးမြတဲ့ အပူချိန်ကို ဘယ်လောက် ထိန်းနိုင်သလဲ အတိုင်းတာနဲ့ CPU Performance ကို အဆုံးဖြတ် ပေးမှာပါ။
GF63 10SCXR with i7-10750H
စတုတ္ထမျိုးဆက် Skylake Architecture သုံးထားတဲ့ ပရိုဆက်ဆာ ဖြစ်လင့်ကစား TDP (Thermal Design Power) ကို 35W နဲ့ 45W Configure လုပ်နိုင်ပြီး 12MB Intel Smart Cache နဲ့အတူ Memory ကို 2,933 MHz DDR4 အထိ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။
10SCXR မှာတော့ 8GB DDR4-2666 MHz အမျိုးစား Samsung ကို Single Slot မှာ သုံးပေးထားတယ်။ တကယ်လို့ i7-10750H Peak Performance သုံးချင်ရင် နောက်ထပ် 8GB ထပ်စိုက်ဖို့လိုပြီး Dual Channel Mode နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်တင်နိုင်ပါတယ်။
အကယ်လို့ RAM ပမာဏ များများလိုအပ်တယ်ဆိုရင် 64GB ထိ Upgrade လုပ်နိုင်မှာပါ။
Storage ပိုင်းအတွက်ဆိုရင်တော့ M.2 Single Slot ပါဝင်ပြီး HDD အတွက် 2.5 Inch Space တစ်ခုပါဝင်ပါတယ်။ စာရေးသူ သုံးနေတဲ့ GF63 မှာဆိုရင် 256GB SSD + 1TB HDD ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
အခုလို Combo သုံးတဲ့ Solution မျိုးက ဒီဖက်ခေတ် အနေထားနဲ့ ကြည့်ရင် မလိုက်ဖက်ပေမယ့် Budget နွယ်တဲ့ Gaming Laptop တစ်လုံးအတွက် OS နဲ့ Software + Data သုံးသမားတွက် အံကိုက်ဖြစ်စေမှာပါ။
အိုကေ GPU အပိုင်း ဆက်ပြောကြတာပေါ့
GeForce GTX 1650 Max-Q ဆိုတာ MSI မှမဟုတ် တခြားသော Brand တွေရဲ့ Ultrabook မှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ GPU ဖြစ်သလို Gaming Laptop ခေါင်းစဥ်တပ်ထားတဲ့ GF63 မှာ ဘာကွာမလဲ? မြင်သာတဲ့ အချက်က GDDR6 Bus Speed ဖြစ်ပြီး Ultrabook တွေလို့ GDDR5 အမျိုးစား သုံးထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။
သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ GTX 1050 Ti Max-Q ကနေ Upgrade လုပ်မယ်ဆိုရင် 33% Performance Increase ခံစားရမှာဖြစ်ပြီး DirectX 12 Title မှာ GTX-16 Series တွေ ပိုကောင်းတဲ့အတွက် Additional Performance ရရှိဦးမှာပါ။
GeForce GTX 1650 Max-Q Graphics
သို့အတူ Maxwell မျိုးဆက်ရဲ့ High-end GPU ဖြစ်တဲ့ GeForce GTX 980M ထက် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းသလို 4GB VRAM ပါရှိတဲ့ 1650 Max-Q ကတ်ဟာ AAA ဂိမ်းကို Low-to-Medium Setting မှာ Average 40fps နဲ့ ကစားနိုင်သလို eSports နဲ့ Less Demanding ဂိမ်းတွေမှာ Average 100fps နဲ့ ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဆိုတော့ Design & Feel ဖက် သွားကြတာပေါ့
GF63 မှာ အပေါ်ဘက် Lid အဖုံးကို အနက်ရောင် Brushed Aluminum သုံးထားပြီး အတွင်း Body ကိုတော့ အနက်ရောင် Brushed Plastic ကိုသုံးပေးထားပါတယ်။ Lid ရဲ့ကျော်ပြင်ဘက်က MSI Dragon Logo နဲ့ Keyboard ကို Red Theme နဲ့ ဖော်ကျူးထားပါတယ်။
Lid ရဲ့ ကျော်ဘက်ခြမ်းနဲ့ Body အသားတွေက ချောမွတ်နေတဲ့ အနေအထားမျိုးမဟုတ်ပဲ Texture ပါးပါးလေးတွေနဲ့ Sharp ဖြစ်နေပါတယ်။ Build Quality အရ သင့်တင့်တဲ့ အနေအထားမှာတော့ရှိပါတယ်။
Dimension တွေကတော့ မပြောချင်ပေမဲ့ ဘေး၂ဖက် ပါးလာတဲ့ Laptop မို့ အခြား 15 inch Laptop တွေနဲ့ယှဥ် အနည်းငယ်ပိုသေးလာတဲ့အတွက် ဒီဖက်ခေတ်မှာ Dimension ကလည်း Laptop တွေအတွက် အရေးကြီးလာတယ်လို့မြင်မိပါတယ်။
Width အနေနဲ့ 35.9cm, Depth က 25.4cm နဲ့ အထူကတော 2.1cm ထူပါတယ်။ Entry Level Gaming Laptop အနေနဲ့ 2.1cm က မဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာပါ နဂိုကလဲ Thin Model ဖြစ်နေတာကို GS Model တွေလောက် မပါးပေမဲ့ သူ့အနေအထားနဲ့တော့ မဆိုးဘူးလို့မြင်မိပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Weight ပါ၊ MSI Website မှာ 1.86KG လောက်လေးတယ်ဆိုပေမယ့် 120 Watt power brick နဲ့ပါ ပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် 2.1kg လောက် သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Weigh ဟာ Ultrabook တွေလောက် Portable ဖြစ်တဲ့ Class ထဲ မပါပေမယ့် ဖင်ထူ လေးလံတဲ့ Gaming Laptop တွေလိုတော့ ပခုံးအနာခံပြီး သယ်စရမလိုတာ အားသာချက်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ကျနော်တို့ Review Unit မှာ 1080p 60Hz IPS နီးပါး ကောင်းမွန်တဲ့ LCD Panel တပ်ဆင်ထားပြီး GF63 Line-up မှာ 144Hz (သို့) 120Hz Refresh Rate မြင့်တဲ့ Option တွေ ရွေးချယ်ခွင့် ရှိပါတယ်။
60Hz ဖြစ်နေတဲ့ 15.6 Incher တစ်လုံးအတွက် GTX 1650 Max-Q က Fair ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုနိုင်သလို တဖက်က တွေးကြည့်ရင် ဂိမ်းမှအပ Light Video Editing အတွက် GF63 Thin ကို အသုံးချ နိုင်ပါတယ်။
Panel ပိုင်း ထူးခြားချက် ပြောရရင် Bezels တွေ 8mm ထိ သေးသွားတယ်၊ Online ပေါ်က Display Colour Gamut တိုင်းတာချက်တွေအရ sRGB ကို 64%, NTSC ကို 46% နဲ့ AdobeRGB ကို 48% ရှိပါတယ်။
အနောက်ရောင်တွေမှာ Backlight Bleed လေးတွေတော့ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Display အပေါ်ဘက်ခြမ်း အစွန်းလေးတွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အလယ်အပေါ်ဘက်ခြမ်းမှာတော့ 720p camera နဲ့ Microphone တို့ ပါဝင်ပါတယ်။
GF63 10SCXR က Full Size Keyboard သုံးထားတ မဟုတ်တဲ့အတွက် NumPad လိုနေရာမျိုးနဲ့ Extra Keys တို့ ပါဝင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Single Red Backlight အမျိုးစားကိုပဲ သုံးပေးထားပြီး Entry Level Gaming Laptop တစ်လုံးအတွက် အနီရောင် MSI Logo နဲ့ တသားတည်း ဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။
နှိပ်ရတဲ့ Feedback အပိုင်းမှာ Key Travel မဆိုးသာဘူးဆိုပေမယ့် ဂျွတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ Clicky မဖြစ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ Key Cap နဲ့ လက်ချောင်းထိလိုက်တာနဲ့ နှိပ်ပြီးသား ဖြစ်မသွားလို့ တစ်ခါတလေ အားစိုက်ထုတ်နေရတာ မသန်တဲ့ လက်ချောင်းငယ်တွေအတွက် ပြဿနာပါ။
Touchpad မှာတော့ GE/GP စီးရီးတွေလို Force ClickPad မသုံးတော့ဘဲ GS စီးရီးတွေလို့ Smooth TouchPad သုံးလာတာ သတိထားမိပါတယ်။ Touch ဧရိယာ ပိုမို ကျယ်ပြန့်တာတဲ့အပြင် Windows Precision Driver ကြောင့် ရွှေ့ရတာ Smooth ဖြစ်နေတာပါ။
Ports တွေဘက်ကိုသွားရရင် MSI Laptop တွေကို တကယ်အားမရဘူး ဘယ်ဘက်ခြမ်းကိုကြည့်လိုက်ရင် Air exhaust Vent ပြီးရင် Power Input နဲ့ USB 3.1 Gen1 Type A တို့ကိုတွေ့ရမှာပါ။ ညာဘက်ခြမ်းမှာဆိုရင် 3.5mm mic နဲ့ headphone jack, USB 3.1 Type A Port ၂ ခုနဲ့ Type-C Port ၁ခုကို တွေ့ရမှာပါ Thunderbolt နဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ ဖော်ပြထားခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ ပြီးရင် Ethernet port နဲ့ Kensington Lock တို့ကိုတွေ့ရမှာပါ။ နောက်ဘက်ခြမ်းမှာတော့ HDMI Port ကိုတွေ့ရမှာပါ။
စာရေးသူအထင်က HDMI က 30Hz 4K လောက်ထိ Support လုပ်မယ်ထင်ပါတယ်။ Port တွေကို အားမရဘူးဆိုတာက MSI Laptop တွေရဲ့ Port တော်တော်များများက Body ရဲ့ အလယ်နားရောက်နေတော့ Mouse တို့ အခြားသော ကြိုးတွေတတ်သုံးရင် နည်းနည်းတော့ ရှုပ်နေတတ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ Design Language နဲ့ပြန်ချိတ်ရရင် အပြစ်ပြောစရာလေးဖြစ်လာပါတယ်။ CPU Cooler Fan အနေနဲ့လည်း တစ်လုံးထဲပါတော့ အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲ Air exhaust ကတည်ရှိနေတာပါ။ အဲ့ဒီ Exhaust တွေကပဲ မလှပဖြစ်နေတာပါ။ ဘယ် ညာ ၂ လုံးမှာ ရှိဖို့လဲမလွယ်သလို နောက်ဘက်ခြမ်းမှာဆိုရင်လဲ တခြမ်းထဲမှာပဲ ရှိနေတာက နည်းနည်းတော့ ရုပ်ဆိုးစေပါတယ်။
2 Watt Speaker ကို အရှေ့အောက်ဘက်ခြမ်းမှာ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Volume ပိုင်း ကျယ်ကျယ် ရှင်းရှင်းကြားရပေမဲ့ Bass သံတော့ တိုးပါတယ်။3Cell 51 Whr Battery ထည့်သွင်းထားပြီး Background apps တွေပိတ် Brightness တဝက်လောက်နဲ့ YouTube Video တွေကြည့်တာတောင့် ၅ နာရီကျော်ကျော်ခံပါတယ်။
ဒါက Gaming Laptop အတွက်ဆိုရင် ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ Result ပါ။ Integrated Graphic ကိုပြောင်းသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Battery ကို ပိုပြီး Improve ဖြစ်အောင် သုံးနိုင်ပါတယ်။ Thermal testing မှာဆိုရင်လည်း Heat Pipe တွေကို CPU ကော GPU ပါ Share သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု Effect ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါမဲ့ Fan တစ်လုံးထဲနဲ့ CPU ကော GPU ပါ အေးအောင်လုပ်နိုင်တာတော့ မဆိုးဘူးဆိုရမှာပါ။ Default speeds နဲ့ AAA Game ဆော့တဲ့အခါ GPU ကော CPU ပါ Temperature 91°C ထိတတ်ပါတယ်။ Cooler Boost Mode ကိုဖွင့်တော့မှ 70°Cဝန်းကျင်လောက်ထိ ဆင်းတဲ့အတွက် Fan တစ်လုံးထဲ စွမ်းအားက တော်တော်လေး Improve ဖြစ်လာတယ်ပြောရမှာပါ။
Stress အသုံးများတဲ့သူတွေအတွက်တော့ Cooler Boost ဖွင့်သုံးဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ စာရေးသူတောင် ဒါကို Air Con ခန်းထဲမှာစမ်းလို့ နည်းနည်းတော့ ကွာဟမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ (Bench-marking ပိုင်းတွေမှာ အချိန်သိပ်မရလို့ အသေးစိပ်တော့ မစမ်းဖြစ်ခဲ့ပါ)
Overall အနေနဲ့ဆိုရမယ်ဆိုရင် စာရေးသူအထင် GF63 Thin က သူ့စျေးတန်းမှာတော့ Pretty Nice တစ်ခုပါ။ i7-10750H က စျေးကွက်ထဲမှာ ကောင်းတဲ့ CPU တစ်ခုပါ ပြီးတော့ GTX 1650 ဆိုတာကလဲ ဂိမ်းအများစွာအတွက် အေးဆေးနိုင်နင်းဆော့လို့ရပါတယ်။
အချို့ Heavy Load အခြေအနေမှာ Thermal Throttling အချို့ရှိပေမဲ့ Battery life ကလည်း ကျေနပ်စရာတော့ ကောင်းပါတယ်။ Higher End Laptop တွေရဲ့ Trend လို့ပြောရမယ် Thin Bezels တွေက ဒီ GF63 အတွက် အပိုဆုဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။
Display ပိုင်း Graphic ပိုင်းအတွက် ငွေနည်းနည်းထပ်စိုက်ပြီး ဒီ Model မှာ အခြား Option တွေရွေးလို့ရပေမဲ့ MSI GF63 Thin 10SCXR လေးကလည်း ပေးရတာနဲ့ တန်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိကြောင်းရေးသားရင်း….
MSI GF63 10SCXR Official Homepage
Unity ရဲ့ Verified Partner ဖြစ်လာသလို 12GB RAM နဲ့ ပေါက်ကြားလာတဲ့ ROG Phone 3